Tantsaha amin'ny ririnina amin'ny rongony - avo, fotsy, kavina, kavina hoditra amin'ny hoditra
Lamaody Toro-làlana hiantsenana
Vehivavy kiraro amin'ny felaka - ireo modely lamaody indrindra sy ny zavatra tokony harahina?
Ny fananganana kiraro fanatanjahan-tena miaraka amin'ny endriny mahafinaritra dia manaporofo ny lazan'ny be sy ny maro amin'ireo torolàlana samihafa amin'ny endrika iray. Ankehitriny ny tselatra amin'ny felakelin'ny vehivavy - tsy angano fotsiny ny vanin-taona amin'ny ririnina, fa koa ny famenoana ny tongolobe isan-karazany amin'ny vanim-potoana mafana. Ary ny lokon'ireo hevitra noforonina dia hanampy ny fashionista rehetra manantitrantitra ny maha-tokana azy.
Ao amin'ny lamaody farany amin'ny famolavolana kiraro mahazatra dia matetika ampiasaina tsy toy ny fampangatsiahana, fa toy ny ornament ihany koa. Amin'ny ankapobeny dia mpitsikilo ny hoditra voajanahary, ary ny safidy dia tena samihafa - avy amin'ny vokatra ara-tsosialy miaraka amin'ny osy, lamban'akondro, ondry amam-boninahitra, fox, bitro ary na dia mingonongo aza. Ny antsipiriany lehibe amin'ny famolavolana ny akanjo vita amin'ny tongotra dia ny endriky ny tenany ary ny fironana farany indrindra dia ny mpitaingina kiraro amin'ny vehivavy:
Ireo kiraro vehivavy amin'ny tongotra eo amin'ny lampihazo . Ambony avo malemy no nanjary nalaza fa tsy noho ny fanatanjahan-tena. Mifanaraka amin'ny fivalozana malefaka, ny fitaovana mahazatra dia manasongadina ny tsirony sy ny fahatokisan-tena amin'ny fombafomba.
Tsy misy laces . Tena tsara tarehy sy mijery ny vokatra tsy misy fikikisana. Eto, ny felam-paty dia afaka mameno ny tendrony, ary ny toe-tsofina na ny tongotra ihany.
Vehivavy kirikitika matevina . Amin'ny vanim-potoana mangatsiaka dia mody sarobidy be loatra amin'ny mody matevina. Ao anatin'io lamina io, ny endriky ny endrika dia mahafinaritra amin'ny endriky ny sisiny.
With backlight . Ny lamaody malaza miaraka amina hain-trano dia aseho amin'ny aliman-koditra malaza. Fomba tsara indrindra hanasongadinana ny tsy firaikanao sy ny endriny manokana.
Miakanjo matevina amin'ny tampony
Ny vahaolana malaza indrindra dia ny fanorenana eo an-tampon'ilay kiraro. Ny mivalomamy mivelatra amin'ny felam-boninkazo ambony dia asehon'ireo endrika avo lenta sy ambany. Ny mpanaingo dia miara-mena amin'ny loko iray loko iray ary mameno ny fomba fanontam-pirinty miaraka amin'ny loko volom-borona voajanahary. Ny vahaolana maoderina dia ny firavaka firavaka misy fihenam-bidy. Amin'io tranga io dia ilaina ny mameno amin'ny fonosana velcro malemy, manarona ny zipera na ny rivotra. Indrindra indrindra fa maotina, ny tendron'ny felam-bolo dia mitodika amin'ny akanjom-bazaha.
Mpanjifa amin'ny pompoms
Ny fironana amin'ny famoriam-bola farany dia ny famokarana kiraro kezhualnoy amin'ny endriky ny baolina malefaka. Ny Pom-poms dia afaka mameno ny lace na manamboatra ny tampony. Ny mpanamboatra dia manandrana ny isa, ny vahaolana loko ary ny haben'ny add-ons. Ny lamaody farany indrindra dia ireo kiraro marevaka amin'ny alàlan'ny lamba palma - mavokely, fotsy, akora, ary ny hafa. Ny fitaovana fanampiny dia matetika ataon'ny metaly metaly amin'ny tongotra na volon'ondry, volamena na volafotsy vita printy, ary ireo mpihetsehan'ireo lamaody stylistika dia manolotra accessories miaraka amin'ny lamosina sy rhinestones.
Mpanjifa amin'ny lelamana
Tena mahaliana sy maotina ny modely amin'ny sary miloko marefo eo ambanin'ny kofehy na ny velcro. Ny endrika mifanohitra aminy dia manintona. Ny mpanamboatra lamaody dia mandoko ny vala amin'ny loko marevaka na gradient, izay manala tanteraka ny loko maizim-bony na maivana ny fotony. Ny endriky ny lela dia ampiasaina tsy ho an'ny haisim-bolana ihany, fa koa ho an'ny olona voasesika. Ny mpilalao baolina eo amin'ny felam-batana dia ho lasa lantolava mazava eo amin'ny sary, raha ny endrikao dia asehon'ny lava lava sy malefaka. Amin'ity tranga ity, ny fitaovana voajanahary - raccoon, Arctic fox ary ny hafa - dia mety kokoa.
Sokatra vita amin'ny hoditra misy menaka
Ny tena azo ampiharina sy azo itokisana amin'ny vanim-potoana marefo sy vovoka dia ny vokatra vita amin'ny hoditra. Ankehitriny, nalaza ny akora voajanahary sy ny akanjo vita amin'ny natiora. Raha misafidy ny famitana ianao, amin'ny antsipirihany fanampiny, dia mendrika ny mitoetra ao amin'ny loko lolo monochrome. Mba hanampiana lantihy mamirapiratra, mitodiha any amin'ny modely misy dika printy, mifanohitra amin'ny karazan-damba, loko matevina. Amin'ny vanim-potoana mangatsiaka dia ho tonga ny tena mpilalao mofomamy ny vehivavy amin'ny ririnina. Amin'ny vanim-potoana mafana dia mety tsara ny endri-poko iray.
Jeansy amin'ny tavy
Ny vahaolana tonga lafatra ho an'ny tanora na ny tsipika isan-tanàna dia ho vokatra miaraka amina denim. Amin'ity tranga ity, ny orinasa tena izy dia ny sisiny, ny fivalanana malefaka loko fotsy na eo amin'ny loko voajanahary. Ireo tennis jeans miaraka amin'ny akanjo felana dia aseho amin'ny loko manga sy loko malaza. Ny endriny maotina, ny vokatry ny boobs, applique. Ho an'ny akanjo toy izany, misy sehatra avo, kodiarana ary naingam-pandehanana. Ny fanampiana mahafinaritra dia mety mitongilana, indrindra amin'ny fomba tsy mahazatra amin'ny fatorana.
Tsen-kiraro amin'ny ririnina
Ny famaranana ny sary amin'ny fanatanjahantena ara-panatanjahantena nandritra ny taona maromaro dia najaina ho hevi-dalina ho an'ny fiofanana matihanina. Noho izany, modely toy izany dia azo jerena ao anaty fanangonana marika, tsy manokana fotsiny amin'ny fitarihana fanatanjahantena, fa misolo tena akanjo sy akanjo maotina isan'andro. Ireo mpihetsim-bolo amin'ny ririnina amin'ny ririnina dia tena tsy hay hadinoina amin'ny fampisehoana marika malaza toy izany:
Dolce & Gabbana . Ity marika ity dia nahavariana ny fahafahany mifandrohy isan-andro amin'ny luxury. Ny mpanamboatra dia mampiasa haingon-tsofina marevaka amin'ny loko mamirapiratra, modely fanenoman-tena eo amin'ny sehatra iray ary ny tokotanin'ny traktera.
Louis Vuitton . Ny mampiavaka ny marika dia ny fampiasana ny dite natoraly miaraka amin'ny endrika avo. Ny mpanamboatra trano maoderina any Frantsa dia manolotra vokatra mitovitovy amin'ny vehivavy amin'ny endrika loko iray.
Puma . Ny lohahevitra fototra amin'ny vokatra amin'ny marika alemana dia natao amin'ny asa. Ny modela avy amin'ny Puma dia misy fitaovana maimaim-poana, ny vokatr'ilay fitaratra, ary vita amin'ny hoditra tena izy. Eto ny fanala dia manify, fa tena hafanana.
Gucci . Ny vokatra avy amin'ny marika Italiana dia mifangaro tsara ny fomba sy ny fampiharana. Ny lamaody mahasalama dia vita avy amin'ny hoditra voajanahary vita amin'ny hoditra vita amin'ny maingoka amin'ny endriny vita amin'ny Gucci sy ny akora vita amin'ny bitro voajanahary na mink.
Snowy amin'ny ririnin-tsolika vaovao
Ny orinasa malaza manerantany, izay mihabetsaka hatrany hatrany, dia manisy fiheverana manokana ny loko misy kiraro mafana. Ireo kibon'ny ririnina dia mipoitra amin'ny endrika marevaka sy mahazatra. Ny pilotra mafana dia mandrakotra tanteraka ny fitaovana avy ao anatiny ary na dia ny biriky aza. Ny singa miavaka dia ny safidin'ny loko. Ny mpanamboatra am-pilaminana dia mampifangaro fofona mamirapiratra ary manolotra tsikombakomba mifanohitra amin'ny tonony manintona sy malefaka. Ao amin'ny fanangonana ny New Balance, ny ankizivavy tsirairay dia hahita vahaolana maika ho an'ny tenany.
Ireo mpitaingin-tsiranoka amin'ny ririnina Adidas amin'ny felany
Ny modely ho an'ny ririnina avy amin'ilay marika fanatanjahantena ara-panatanjahantena Adidas dia naseho tamin'ny lamaody lamaody lamaody. Ny kitrokely vita dia vita amin'ny voajanahary na voajanahary. Ny mpanamboatra dia mampiasa fitaovana voajanahary. Ireo mpitaingin-tsoavin'ny vehivavy amin'ny ririnina Adidas amin'ny felam-boninkazo dia vita amin'ny hoditra sy ny akanjo. Azonao atao ny mahita ny fiovana maoderina eo amin'ny famolavolana ny fitaovana - ny loko marevaka, ny kofehy vita amin'ny lacquered sy matte, ny fametrahana ny hoditra sy ny akorandriaka. Maro koa ny vahaolana loko. Eo amin'ny fironana, loko iray mibaribary tsara ary misy sary volom-boanjo mainty sy fotsy.
Ireo mpihazakazaka amin'ny ririnina ho an'ny vehivavy dia ny Nike miaraka amin'ny felany
Ny fanangonam-bokatry ny marika amerikana dia mazava tsara fa mizara sokajy roa amin'ny kiraro mafana. Ny voalohany dia Accessories ho an'ny akanjo isan'andro. Eto dia ny fanamafisana ny toetra voajanahary sy ny singa mahery. Ireo mpanamboatra dia manolotra ny vokatra vita amin'ny hoditra sy ny akanjom-bolo amin'ny endrika mamirapiratra na tony. Ny sokajy faharoa dia ahitana ny mpakafy amin'ny ririnina Nike miaraka amin'ny tongotra ho an'ny fanatanjahantena matihanina eny an'arabe. Ny modely toy izany dia manana fantsakana tsara ary na dia ao anatin'ny hatsiaka ratsy indrindra aza dia tsy hamela ny tongotr'izy ireo hikoriana.
Mpivarotra ririnina ho an'ny vehivavy ny renirano Reebok
Ny endri-tsarobidin'ny vokatra avy ao amin'ny Reebok no tena mampiavaka azy. Ny tokon-tsetroka marevaka dia mifangaro miaraka amin'ny kofehy mihidy ary fitongilana matevina. Noho ny endriny klasika, ny zana-koditra amin'ny tongotra dia zaraina maimaim-poana, izay manome tokantrano avo 100 heny. Ny mpanamboatra dia tsy mampiasa vodiny hanaovana tanjona. Sneakers Reebok miaraka amin'ny akanjo - kiraro kiraro ho an'ny kofehy mavitrika isan'andro. Ny loko sy ny loko madinika dia manao akanjo toy izany amin'ny ankapobeny eo ambanin'ny akanjo.
Amin'iza no tokony hitafy tennis amin'ny menaka?
Ny fisafidianana akanjo tsara indrindra amin'ny akanjo fanatanjahantena amin'ny fanatanjahantena dia ny jeans. Ary eto ny fomba rehetra - ny hoditra, ny sipa, ny kilasy, ny felana dia mety. Ny leggings na ny leggings dia heverina ho hafa. Raha maka ny pataloha amin'ny loko mitovy amin'ny farany ianao, dia ho tonga amin'ny fotoana lava ny tongotra. Mba tsy hijery dabibo, mampifanaraka ny lokon'ny fahazavana sy ny lokomamy fotsy hoditra amin'ny volon'ondry. Toy ny sokajy ivelany , ny jacket midina, ny valan-javaboary na ny varahina ivelany dia lavorary. Aza adino ny momba ireo fombafomba lamaody - kapaingo-tongotra, akanjo marevaka na kiraro, kofehy ary ny toy izany.
Fehikibo hoditra - fanovozan-tarehy lamaody amin'ny fitafiana avy amin'ny evocative mankany amin'ny fiainana andavanandro
Zana-ketsa tsy tapaka miaraka amin'ny fihenan'ny vokatra
Ny kapoaky ny vehivavy amin'ny volon'ondry
Akanjo fotsy ho an'ny tsirony - fohy na lava, takariva na tsy mahazatra
Toho-tantely amin'ny akora am-paosy
Ny akanjon'ny vehivavy - ireo modely modely sy modely
Long Dress Silk
T-shirt silk - sary 36 fototry ny lamaody amin'ny vehivavy sy ny zazavavy
Clothes for snowboarding - ny fomba hisafidianana ny zavatra tsara, inona no hitranga?
Rosary ortodoksa - fomba fampiasana?
Fanamboarana rindrina fanorenana
Ny asa tanana amin'ny Paka amin'ny tanany manokana
Ny fitsaboana ny lalan-drà varicose amin'ny laser
Sakafo kalorika misy holatra voankazo
Nahita mpivaro-tena tamin'i Kate Hudson ny reniny sy ny fofombadiny
Trano fandokanana koveta
Fampakaram-bady tsara tarehy eo amin'ny tampon'ny Everest - nofinofy teo amin'ny fiainana
Voankazo voarara - nahoana no mamy foana?
Ny fomba hitadiavana zazavavy iray - fomba amam-pahefana zato
Tafio amin'ny tanan'ny tanana vita amin'ny hazo
Fahasamihafana malemy - soritr'aretina sy fanafody
Afangaro avy amin'ny tsigenki
Jerosalema artichoke - fananana medikaly
Tavoahangy misy alokaloka an-tanety "Ranomasin'ny anjely"
Maniry ny zanany lahy i Madonna
Pankakeza mahavariana amin'ny labiera
Kiraro kiraro kiraro
Maskita ho an'ny hoditra tavy
Numerology of Wealth
Jirom-bolo tsara tarehy - fifantenana sary amin'ny akanjo marevaka indrindra ho an'ny tsiro rehetra